Fanapahana Henjana Ao Atlantic City: Blaogy Lahatsarin’ny Tanora Ho An’ny Fivoaran’ny Fiarahamonina · Global Voices teny Malagasy
Fanapahana Henjana Ao Atlantic City: Blaogy Lahatsarin'ny Tanora Ho An'ny Fivoaran'ny Fiarahamonina
Voadika ny 10 Febroary 2017 15:10 GMT
(Fanamariahana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2005)
Niaina tontolo andro nahafinaritra be aho omaly, niara-niasa tamina ekipa mpampianatra efa ho roa ambin'ny folo avy ao amin'ny sekoly ambaratonga voalohany MLK tao Atlantic City, any New Jersey. Ao amin’ny fiarahamonina ambany fidiram-bola sy be herisetra no misy ilay sekoly; izay tangorontrano vitsy monja miala amin'ilay toeram-pilokan’ny distrika ao an-toerana; avy amin’ny tokantrano Afro-Amerikanina sy Latino miasa amin’ny sehatry ny indostrian’ilay toeram-pilokana ny 95%n’ireo mampiasa ny sekoly. Ao anatin’ny taona fahatelon’ny famatsiambolan’ny Ministeran’ny Fampianarana ao New Jersey izy ireo, ho fampiasana ny teknolojia mba hanatsarana ny fahaizana mamaky sy manoratra ho an’ireo mpianatra , indrindra eo amin’ny sehatry ny fikarohana ireo anton’ny fampihorohoroana sy herisetra eo amin’ny mpifanolo-bodirindrina.
Ankehitriny, amin’izao taona fahatelony izao, mihitatra any amin’ny famokaran’ny mpianatra horonantsary ilay tetikasa, izay antony nahatonga ahy tonga taty nandritra ny roa andro. Ny fampidirana tamin’ireo mpampianatra ny fototra isankarazany amin'ny famokarana horonantsary fanadihadiana no nandaniako ny tapakandro maraina, toy ny andraikitr’ireo mpikambana isankarazany ao anatin’ny ekipa (tonia, mpikaroka, mpamokatra, sns), alimanaka ho an’ny famokarana fanadihadiana iray manokana sy ireo mekanika amin’ny fitantarana fanadihadiana. Ilay vondrona no nitazona ahy havitrika, nanesika ahy fanontaniana nandritra ny maraina tontolo.
Taorian’ny sakafo atoandro, nanomboka noerireretinay ny mety ho fizotr’ilay tetikasa mandritra ny taona. Ho ampidirinay ny blaogin-dahatsary ho toy ny fitaovana fototra ao anatin'ny dingan'ny fampianarana, toa izay hanana mpianatra mamorona ny fanadihadian'izy ireo ka hiantso izany indray andro any. Hitantana blaogin-dahatsary roa ireo mpampianatra, izay ho antsoina vonjimaika hoe “Fanapahana Henjana Tao Atlantic City” sy “Fanapahana Farany ao Atlantic City”. Ho ampiasaina hanolorana voalohany ireo asan’ny mpianatra efa mandeha ilay blaogy ho an’ny lahatsary “Fanapahana Henjana” – “fanapahana henjana” avy amin’ireo horonantsary fanadihadiana izay mila tsikeraina. Ho avoakan’izy ireo ao amin’ilay blaoin-dahatsary izy ireny, fomba iray hanangonana ireo tsikera avy amin’ny vahoaka, indrindra ireo mpanao blaogin-dahatsary manerana izao tontolo izao. Avy eo, handinihan'ny mpianatra ireny sosokevitra ireny, hanapa-kevitra amin’izay mety ka hamerina ireo lahatsary. Hamerina hamoaka azy ireo ao amin’ilay blaogy ‘fanapahana henjana’ raha ilaina izany. Farany, ho avoaka ao amin’ny blaogy “Fanapahana Henjana Ao Atlantic City” ireo lahatsary, rehefa vonona ho amin’ny fotoanan’ny mivantana, ho an’ireo olona te-hiaina fotsiny ny vokatra farany.
Raha ny fantatro, voalohany indrindra maneran-tany izao fampidirana ny blaogin-dahatsary ao anatin’ny fandaharam-potoanan’ny sekolim-panjakana izao, raha tsy horesahana ny fandaharam-pianarana amin'ny ambaratonga fototra. Ampiasaina ilay dingana manontolo ho an’ny famokarana horonantsary fanadihadiana mba ho toy ny fomba iray anarahana ny fenitry ny fanjakana mikasika ny fifehezana ny famakiana sy ny fanoratana, miainga amin’ny famolavolana ny foto-kevitra mankany amin’ny fanoratana ny tantara sy ny famoahana azy. Ary raha mandeha tsara daholo ny zavatra rehatra, hiafara amin'ny fananantsika tahirinà lahatsary fohy, izay maneho ny karazana fiainana misy eto Atlantic City. Ary na tsy tahaka ny toerana tena “manerantany” aza i Atlantic City raha resaka tanjon'ity tranonkala ity, dia ampahany kely amin’ny fanamby izay matetika atrehan’ireo foko vitsy an’isa aty Etazonia izany. Voatsindrin’ny fahantrana, ny herisetra ary ny fitadiavana asa voafetra, miezaka mitady azo atao aoanatin'ireo sakana ao aminy ilay vondrom-piarahamonina, ary manatsara ny firoboroboana eo an-toerana ho an’ny mponina rehetra – toejevatra mety ho hita any amin’ny faritra maro manerana izao tontolo izao.
Ho fanomezam-boninahitra ny fanofanana totoafo omaly, nanomana blaogin-dahatsary iray maharitra dimy minitra momba ny zavatra vitanay aho. Miala tsiny indrindra tompoko noho ny haratsian’ny kalitaon’ny fitantarana – adinoko ny fitaovana fandraketana feo ka tsy maintsy ny fitaovana fandraketana feo an’ny solosaina no nampiasaiko raha sady nisioka ihany ilay fitaovana fitsofana rivotra ao anatiny
31 Oktobra 2021Angletera